रुचि - एक प्राथमिकता। फाराम प्राथमिकताहरू
संख्या शब्दहरू, barbarisms (उधारो रूसी भाषामा अन्य राष्ट्रहरूबाट) निरन्तर बढ्दै छ। गरेको अब प्राथमिकता के हो कुरा गरौं।
शब्द को मूल
शब्द को अंग्रेजी प्राथमिकता भएको मा "प्राथमिकता", व्यापक रूप लेट XIX सताब्दी मा प्रयोग गर्न शुरुवात हो, सबै भन्दा ठूलो महानगरीय देशहरूको उपनिवेश नीति को heyday। यी ऋणबाट अन्तरनिहित ल्याटिन praefero (चयन) छ। तसर्थ, प्राथमिकता - यो प्राथमिकता। खैर, त्यो राम्रो सुनिन्छ। बस सधैं उपयुक्त छैन। तसर्थ, गतिविधिको यो वा त्यो क्षेत्र मा अवधारणा आफ्नो connotations छ छलफल। परीक्षण शब्द भन्दा सामान्यतः अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, वित्तीय र भन्सार सम्बन्ध मा प्रयोग गरिन्छ। जस्तै लगभग सबै उधारो शब्दहरू, "प्राथमिकताहरू" धेरै "जोडाहरू" हो छ। अनुमोदन, अनुमोदन, अवसर, प्राथमिकता र प्रतिरक्षा प्रणाली को उत्तराधिकारी - सबै पर्यायवाची वा समान lexical अर्थ शब्दहरू।
शब्द प्रयोग को क्षेत्रहरु
यति धेरै व्याख्याहरु संग, यो भने शब्दहरूको प्रयोग अचम्मको मात्रा छैन। सीमा मा शब्दावली - यो व्यापक रूप, राजनीतिक आर्थिक, कानुनी, सामाजिक, आर्थिक, तर विशेष गरी प्रयोग गरिएको छ। त्यहाँ preferential साझेदारी, ऋण, शुल्क, मोड, कर्तव्य फरक छन्। त्यहाँ एक preferential मत, लाइसेन्स र preferential व्यापार सम्झौताहरू छ। अर्थात् प्राथमिकता - यो उच्चारण हो, त्यो कुरा को प्राथमिकता, वा बढी महत्त्वपूर्ण कुरा जोड दिए। तसर्थ, preferential ऋण सम्बन्धित ऋण, तत्काल परिशोधन आवश्यक पर्दछ। यो विशेषण एक संज्ञा पछि प्राथमिकता जोड छ।
पहिलो व्यावहारिक आवेदन प्राथमिकताहरू
अक्सर, प्राथमिकता को एक आवश्यक भाग रूपमा मानिन्छ सीमा र महसुल नीति। पहिलो विश्व युद्ध अघि, यो नीति हनन उत्तरार्द्ध आफ्नो colonies सन्दर्भमा देशहरूमा-metropolises लागू हुन्छ। तेस्रो देशमा, उपग्रहहरु वा colonies को शक्तिहरु राम्रो मूल्यहरु मा आफ्नो कच्चा माल र उत्पादनहरु बेच्न अनुमति दिन सक्छ जो आन्तरिक बजार रोक्न क्रममा। अर्को शब्दमा, प्राथमिकतालाई - यो लाभ मात्र होइन र प्राथमिकताहरू, तर पनि restraining लगाम कस्न प्रमुख विश्व शक्ति को हुक्म प्रदान छ। त्यतिबेला यसलाई colonies को एक ठूलो संख्या संग इङ्गल्याण्ड, फ्रान्स, जर्मनी र बेल्जियम, देशहरूमा थियो।
हाम्रो समय मा, लाभ सिस्टम वा भन्सार छूट असम्भव बिना माल को आन्दोलन कल्पना गर्न आर्थिक समुदाय को एक ठूलो संख्या, त्यहाँ हुँदा। यी कार्यहरू लागि अमेरिका को अगाडी विकास रूपमा परिचित छन् अनुकूल अवस्था सिर्जना गर्न "प्राथमिकताहरू को अनुदान प्रदान।" सीमा संघ बेलारुस, काजकस्तान र रूस बीच 2010 मा स्थापित, यो धेरै राम्रो तरिकाले preferential कर्तव्य र शुल्क को लाभ प्रदर्शन गरिएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय लाभ र प्राथमिकताहरू
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा, यो, सामान्यिकृत प्रणाली उल्लेख गर्न सकिन्छ प्राथमिकता को उत्पादन सामान लागि अनुकूल अवस्था सिर्जना गर्ने उद्देश्य साथ 1971 मा स्थापित विकासशील देशहरुमा पनि आर्थिक विकास देशहरूमा र बेचे। के, अन्त मा, उत्पादन विकास र सहायता को अर्थव्यवस्था को विकास गर्न योगदान गर्नुपर्छ। यो आदर्श छ। यसरी, अनुकूल अवस्था देखि देखा गरेको बुल्गेरिया, हंगेरी, चेकोस्लोभाकिया, देशहरूमा लागि सिर्जना गर्ने वरस सम्भ्कौता। र त्यसपछि आर्थिक प्राथमिकताहरू राजनीतिक overtones प्राप्त गर्न थालेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा, यो धेरै अक्सर हुन्छ। त्यसैले कहिलेकाहीं प्राथमिकता - सख्त अवस्थामा प्रदान लाभ को एक प्रणाली र स्पष्ट रूपमा यसो जो को प्रावधान। लागू गर्न देशहरूमा थप वफादार हुन सक्छ सबैभन्दा इष्ट राष्ट्र उपचार, र यो कम्तिमा सम्भव छ र। यी दर बीच खाली प्राथमिकता को मार्जिन भनिन्छ।
तर अवधि पहिले नै उल्लेख रूपमा "प्राथमिकता",, उद्योग को एक किसिम निर्माण सहित लागू। कसले ओलम्पिक सुविधाहरु को निर्माण सबै पक्षहरूमा मा एक preferential चरित्र थिएन भनेर भन्न सकिन्छ? वा फिर देखि हथियारबंद होना, वा सुदूर पूर्व को विकास, वा शिक्षा प्रणाली सुधार? ..
preferential नीतिहरू को संरचनात्मक घटक
Preferential नीतिहरू, राष्ट्रिय क्षेत्रीय वा नगरपालिका हुन सक्छ। तर यो सधैं लक्षित छ। उदाहरणको रूपमा, 2013 मा प्राथमिकताहरू विचार: Minenergorazvitiya दबाइ निर्माता लागि 15% छुट सुझाव। त्यसै वर्ष दुई मंत्रालयों - श्रम र शिक्षा मन्त्रालय मंत्रालय - कार्यक्रम प्रस्ताव "प्राथमिकता जवान आमा।" एक वा बढी बच्चाहरु भएका 23 वर्षको उमेर अन्तर्गत महिला, मौका (र अध्ययनको लागि अवस्था वा विशेष पाठ्यक्रम मा पुन तालिम सिर्जना)। खम्बा मा राज्य डेमोग्राफिक कार्यक्रम छ। महिला तिनीहरूले प्रसूति बिदा पछि प्रवेश जो नयाँ अवस्था भिज्न आत्मविश्वास दिएको हुनुपर्छ। आफ्नो पहिलो बच्चा जन्म दिन निर्णय गर्ने महिला को औसत उमेर, 25 वर्ष सारियो। र यो fairer सेक्स मात्र आफूलाई गन्न भनेर भन्छन्। विशेषज्ञहरु भन्न - यो खातामा मुद्दा सबै subtleties लिन आवश्यक छ, र प्रसूति राजधानी र अन्य भुक्तानी, राज्य द्वारा प्रदान गरिन्छ जो बाहेक, यो महिला आफ्नो सुरक्षा विश्वास गर्न को लागि सबै अवस्था सिर्जना गर्न आवश्यक छ।
साधारण अर्थमा र महसुल प्राथमिकताहरू को सिस्टम को उद्देश्य
अन्तर्राष्ट्रिय प्राथमिकताहरू 2013 मा देखि युरोपेली समुदाय देशहरूमा आयात रूसी सामान लागि preferential उपचार गर्नुभएको छ। 2014 मा, यो प्राथमिकता रद्द गरिनेछ। 1993 मा स्थापित युरोपेली संघ को क्षेत्र, मा, महसुल प्राथमिकता (जीएसपी), 1964 मा विकसित र द्वारा 1968 मा व्यापार र विकास संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCTAD) मा2एन डी स्वीकृत को सामान्यिकृत प्रणाली संचालित। यो प्रणाली एक-पक्षीय सहुलियत को रूप मा विकासशील देशहरुमा गर्न महसुल प्राथमिकताहरू सबै औद्योगिक देशहरूको अनिवार्य प्रावधान समावेश छ। यी सबै वर्ष समयमा कैप को आधारभूत tenets एकदम परिवर्तन भएन। निरन्तर मात्र देश प्राथमिकताहरू अनुदान जो परिवर्तन, वा लाभार्थीको देश शासन सरलीकृत, प्रदान लाभ को मात्रा रूपमा परिवर्तन भएको छ। सबैभन्दा अल्पविकसित देशहरूमा पहिचान गर्न अमेरिका आफूलाई भइरहेको छ भिन्नता विकास। रेकर्ड र पर्यावरण धम्की।
कसरी कानुनी निकाय सिर्जना गर्छ?
कसरी म INN पासपोर्ट
रूसी संघ मा नयाँ नमूनाको पासपोर्ट कति छ?
पिता को सहमति बिना बच्चा को नाम कसरी परिवर्तन गर्न: चरण निर्देशनहरूको द्वारा कदम। नाम परिवर्तन को लागि आवेदन
विशेष उत्पादन। GIC आरएफ, कला। 262: "द अवस्थामा विशेष प्रक्रिया मा अदालत छलफल"
के र कसरी गुलाबी वंचित उपचार गर्न?
5 सरल अशक्त हेरविचार तरिकाहरू
घर मा प्लास्टिक को सजावट।
पन्नी मा ओवन मा रसदार मासु
Sviblova ओल्गा। जीवनी प्रतिभाशाली व्यक्ति
नयाँ वर्ष जर्मनी - एक रंगीन extravaganza मुड
स्तन क्यान्सर, चरण लडाई
कसरी एक पटक र सबै को लागि क्षति र दुष्ट आँखा विरुद्ध सुरक्षा गर्न
कसरी बनाउने र सेट: को बँदेल मा टिका
कसरी लिनक्स र Windows सञ्चालन प्रणाली मा जावा अद्यावधिक गर्ने?
स्टाइलिश हेर्न हरियो स्कर्ट के लगाउन?
वेब क्यामेरा ल्यापटप सरल प्रयोगकर्ता कसरी स्थापित गर्न